दुर्गगका डाक्टरद्वारा सालिन्दा दुई सयको हाड जोडजाड – Tesro Ankha
दुर्गगका डाक्टरद्वारा सालिन्दा दुई सयको हाड जोडजाड
दुख–बिमार पर्दा उपचारका लागि अस्पताल जानु स्वाभाविकै मानिन्छ । उपचारका लागि बिरामी लिएर अस्पताल पुग्दा चिकित्सकले नै सामान्य मानिसकहाँ पठाए भनेचाहिँ तपाईं के गर्र्नुहुन्छ ? डाक्टरले पठाएको व्यक्तिकहाँ जानुहुन्छ ?
नगएर के गर्नु ? बिरामी निको पार्नु छ भने चिकित्सकले पठाएको व्यक्तिकहाँ जानैपर्छ । जिल्ला अस्पताल खोटाङले उपचार गर्न नसकेका बिरामी रामबहादुर अधिकारीकहाँ पठाउने गर्छन् ।
हाड भाँचिएर अस्पतालमा महिनौं उचार गर्दा पनि ठीक नभएकाको अधिकारीले उपचार गर्ने गर्छन् । वर्षौंदेखि हाड भाँचिएकाको घरेलु उपचार गर्दै आएका उनले सालिन्दा दुई सयजनाको उपचार गर्दै आएका छन् । उनले भुइँचम्पा, हर्चुल, हाडजोर र रसायनमिश्रित औषधिबाट औषधोपचार गर्छन् । उल्लिखित जडीबुटी आफूले कोसीगड्तीरबाट संकलन गर्ने उनको भनाइ छ ।
हजुरबुवाले सिकाएको यो कामले अस्पताल गएर उपचार गर्न नसक्नेका लागि उनी वरदान साबित भएका छन् । न उनी डाक्टर हुन् न त धामीझाँक्री नै । तर पनि उनको घरेलु उपचारबाट धेरै लाभान्वित भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘तीन महिनासम्म अस्पताल बसेर उपचार गर्दा पनि भाँचिएको हात निको भएन,’ दिक्तेलनिवासी विष्णु बस्नेतले सुनाए, ‘त्यसपछि अधिकारीकहाँ गई औषधोपचार गरेपछि भाँचिएको हात ठीक भयो ।’ बस्नेतको भाँचिएको हात आफूले घरेलु उपचारबाट निको पारेपछि जिल्ला अस्पताल खोटाङ तात्कालिक चिकित्सक गणेश राईले बधाइसहित २ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएको अधिकारीले बिर्सेका छैनन् ।
खोटाङ जिल्ला सदरमुकाम दिक्तेलबाट रामबहादुर अधिकारीको घर याम्खा–५, लिलिमा खोटाङ पुग्न सात घन्टा लाग्छ । ओखलढुंगा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, भोजपुर र सिरहाबाट हातखुट्टा भा“चिएका मानिस अधिकारीकहाँ उपचार गर्न पुग्छन् ।
२०७३ माघ ७ ०१:१९
ऊर्जामन्त्री पुनद्वारा हेलिकोप्टरबाटै दूधकोसी
काँग्रेस नगर कार्यसमिति सभापतिमा राई निर्विरोध
काँग्रेस नगर उपसभापति राईद्वारा पद्मसम्भवको मूर्ति